PPR, PE, PP လူပျိုအလွှာသို့မဟုတ် Multi-layer ကိုပိုက် Co-extrusion ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - တရုတ် Qingdao Xinquan ပလတ်စတစ်
ပလပ်စတစ်ဘုတ်အဖွဲ့ / ပြားထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ပလပ်စတစ်နဲ့ WPC Profiles ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PE, PP, PS, ကို ABS စာရွက်နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC ကိုယ်ရေးဖိုင်နှင့် PP, PE PVC WPC ကိုယ်ရေးဖိုင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PPR, PE, PP လူပျိုအလွှာသို့မဟုတ် Multi-layer ကိုပိုက် Co-extr ...
PP Hollow Grid ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PC ကို Hollow Grid ဘုတ်အဖွဲ့ / စာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC နှင့် WPC အပေါ်ယံလွှာမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PMMA PC, ပေစာရွက် / ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PPR, PE, PP လူပျိုအလွှာသို့မဟုတ် Multi-layer ကိုပိုက် Co-extrusion ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
တည်ဆောက်ခြင်းမှာအပူနှင့်ရေပေးဝေရေးလုနီးပါး PPR ပိုက်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီအပိုက်, လွယ်ကူသော, အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အစိမ်း, အလင်းအလေးချိန်, အကျင့်ပျက်လုံခြုံ, စင်ကြယ်သောခုခံအပူ, install အပူနှင့်ရှည်လျားသောအသုံးပြုမှုကိုကယ်တင်နိုင်ဘူး။
စက်အကြောင်း 2. :
* အဆိုပါ extruder အလွန်အမင်းပလတ်စတစ်စွမ်းရည်အာမခံထားတဲ့တိကျတဲ့နှင့်တိကျမှန်ကန်အပူချိန်ထိန်းချုပ်, ရောက်ရှိဖို့ PLC သို့မဟုတ်အပူချိန် controller ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်, အထူးဒီဇိုင်းဝက်အူမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့မြင့်မားတဲ့ output ကိုသေချာ; မြင့်ကျောမှုနှင့်အနိမ့်ဆူညံသံဘီဗဲလ်ဂီယာသေချာစိတ်ချနှင့်တည်ငြိမ် extrusion စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝစေသည်;
* အဆိုပါဖြန့်ဖြူး PP, PPR များအတွက်သေဦးခေါင်း, PE ပိုက် လိမ်စတိုင်သို့မဟုတ်ခြင်းတောင်းစတိုင်သို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါကြီးမားတဲ့စီးဆင်းနေသောအာကာသပစ္စည်းတစ်ခုအလုံအလောက်၌ကျိန်းဝပ်အချိန်သေချာ; ထုတ်လုပ်ပိုက်အသေးပြည်တွင်းရေးစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ချောမွေ့မျက်နှာပြင်၏ပါ၏ မှို၏ဒီဇိုင်းက PP, PE အမျိုးမျိုးတို့ကို, PPR ပိုက် (Two-အလွှာသုံးအလွှာသို့မဟုတ်လေးခု-အလွှာ) ကိုပုံသွင်းပေးနိုင်သည်မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။
အဆိုပါ Multi-layer ကိုပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်အလွှာသစ်ကိုပစ္စည်းကိုသုံးပါ, ဥပမာများအတွက် 3-layer ကိုပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အသစ်တီထွင်စက်ဖြစ်ပြီး, အလယ်အလွှာများကိုအသစ်ပြန်လည်ပလပ်စတစ် + ဖိုင်ဘာဖန်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည်, ဒီဒီဇိုင်းကိုအလွန်အမင်းတိုးပွါး ပိုက်၏အစှမျးသတ်တိနှငျ့ဆန့, တစ်ချိန်တည်းမှာထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ။
ပိုက်စက်မော်ဒယ် SJG315 SJG-450 SJG-630 SJG-800 SJG-1200
ပိုက်အချင်းမီလီမီတာ 90-315MM 110-450 250-630 400-800 630-1200
ပိုက်အမျိုးအစား တစ်ဦးက ABA တစ်ဦးက ABC ရုပ်သံ တစ်ဦးက ABA တစ်ဦးက ABA တစ်ဦးက ABA
Extruder SJ100 SJ90 / 75 SJ120 SJ100 / 75 SJ120 SJ120 / 90 SJ150 SJ120 / 100 အ SJ165 SJ150 / 120
စွမ်းဆောင်ရည်ကီလိုဂရမ် / h 200-400 250-450 250-450 300-500 300-500 400-600 600-1000 600-1100 600-1200 800-1300
installed ပါဝါ KW 200 250 250 300 300 350 400 450 500 600
ယခင်: ပိုက် (လက်အောက်တွင်-မြေကြီးတပြင် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းပိုက်) ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအကွေ့အကောက်များသောစတင်အကြီးစားအချင်း Hollow အမှတ်တရ
နောက်တစ်ခု: PVC ခေါင်မိုးကိုယ်ရေးဖိုင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
သောက်ရေက Black ပိုက်
Black ကပလတ်စတစ်ရေပိုက် Roll
မြှောင်းပုံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းပိုက်
စတင်ပိုက် Extrusion စက်
H ကို igh ဖိအားစတင်ပိုက်
အမြင့်ဖိအား PVC ပိုက်
High Quality အသေးစားပလတ်စတစ်ပိုက်
အမြင့်အပူချိန် PVC ပိုက်
ပလတ်စတစ်ပြား သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းပိုက်
ပလတ်စတစ် PPR ပိုက်
လူကြိုက်များသော PPR ပိုက်
လူကြိုက်များသော PPR ပိုက်အရွယ်အစားဇယား
PPR ပိုက်ပြီးတော့ Fittings
PVC သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းပိုက်
PVC ပိုက် 150mm
ရေသည် PVC သွယ်တန်းထားသောပိုက်
အတွင်းစိတ်က Cylinder ပုံစံယိုဆည်မြောင်းပိုက် producti ...
စတင်အကြီးစားအချင်း Hollow အမှတ်တရ (ဦးပိုက်အကွေ့အကောက်များသော ...
PVC, PE လူပျိုအမှတ်တရမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်မှု ...
Adress: Wuzhou လမ်း, Jiaozhou စီးတီး, Qingdao, တရုတ်
E-mail ကို: xq9@qdxinquan.com
ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကြိုးစားကြသည်။ သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုခြင်း & ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
Qingdao Xinquan ပလတ်စတစ် Machinery Co. , Ltd မှ©မူပိုင် - 2010-2018: အားလုံးအခွင့်အရေး။